Ahlu sunna oo sheegtay in ciidamadooda ay la wareegtay dowladda
Hoggaanka Culimaa’udiinka Ahlu sunna walJamaaca ayaa sheegay in ciidamada Ahlu sunna ay la wareegtay dowladda Soomaaliya iyagoo sheegay in la mideeyay dhamaan dhinacyadii kala duwanaa ee ku abtirsanayay magaca Ahlu Sunna Waljamaca.
Guddoomiyaha Fulinta Ahlus Suuna Waljameeca oo masuuliyiin sarre oo ka tirsan Isla Ururka oo maanta saxaafadda shir ugu qabtay garoonka diyaaraha Aadan Cabdulle xili ay safar ka ahaayeen magaalada Muqdisho oo ay ku sii jeedeen gobollada dhexe ee dalka ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ugu horeyso hanaanka wada shaqeyn ee ay la leeyihiin dowladda Soomaaliya.
Guddoomiyaha Ahlu Sunna Waljameeca ayaa warfidiyeennada u sheegay in iminka ay socdaan shirar ay leeyihiin dhammaan Ahlu Sunn, isagoo hoosta ka xariiqay in dhawaan Muqdisho uu ka howlgali doono xafiis ay ku mideysan yihiin guud ahaan Culumada Ahlus Sunna si ay u dar-dargaliyaan wada shaqeyn dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale Guddomiyaha Fulinta Culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca Sheekh Maxamed Xeefoow ayaa tilmaamay in shacbiga Soomaailyeed oo idil ay yihiin Ahlu Sunna, ciidamada ahlu sunna ay ka mid yihiin ciidammada Qaranka Soomaaliyeed ee cadowga dagaalka kula jira, isla markaan xaquuqdooda ay ballan qaaday in ay bixineyso dowladda Federaalka Soomaaliya.
Culuma’udiinka Ahlu Sunna Waljameeca ayaa dagaal xoog leh kula jira jiritaanka kooxda shabaab ee doonaya in ay ku faafiyaan xagjirnimada Al-Qaacidda astaanta u ah.